Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere ndị ọrụ obodo Federal si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Ndi oru oru ugbo ala
Ndi oru oru ugbo ala
Winifred Oyo-Ita na-adụ ndị ọrụ gọọmentị aka idebanye na IPPIS
Onye isi nke ọrụ obodo nke Federation, Mrs. Winifred Oyo-Ita, gwara ndị ọrụ gọọmenti etiti obodo ka ha mee ihe dị mkpa-n'ime Ụlọ Ọrụ Mgbasa Ozi Ntanye Integrated (IPPIS) nke Gọọmentị Federal malitere.
Ndi mmadu ole na ole na-amalite ọrụ na Jigawa mgbe ememe Krismas
Ole na ole ndị na-arụ ọrụ na Federal na Wednesday, na Jigawa, maliteghachiri ọrụ mgbe ụbọchị abụọ ezumike ọha mmadụ kwupụtara maka Krismas.
Anyi choro udo ulo ahia iji dozie onodu aku na uba - ochichi govamenti
Gọọmentị Federal ahụ site na Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ na Ọrụ na Federal kwuru na mgbalị ya n'iche nsogbu nsogbu akụ na ụba nke mba ahụ ga-achọ ka udo na nkwekọrịta ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ga-aga nke ọma.
Ụlọ ọrụ ICPC na-agbapụta ụlọ, nde N18 site na ndị ohu obodo, ndị na-erughị uru
Usoro nke mmebi iwu onwe ya na ndị ọzọ na-emejọ iwu Commission agbaghawo ụlọ abụọ dị elu na Federal Capital Territory na N18 nde site n'aka ndị isi obodo na Office nke Isi nke Ọrụ Ndịọrụ nke Federation na ndị na-erughịrị ndị ga-erite uru n'ihi na e mebiri Iwu Mwepụ.
A mara ndị uwe ojii atọ ikpe mara maka enweghị nkwupụta nke akụ
A mara ikpe nke ndị uwe ojii na Tuesday na Abuja ma kpebie ndị ọrụ gọọmentị etiti atọ maka enweghị nkwupụta nke akụ.
Onye isi bu Buhari natara akuko banyere isi ulo oru ozo Abdulrasheed Maina
President Muhammadu Buhari anatawo akụkọ banyere otu onye isi oche nke onyeisi ọrụ Task Force na Pension Reforms, Abdulrasheed Maina, ka e weghachitere ya na obodo.
Adịghị m ewebatara ndị isi obodo ezumike nká onyeisi Abdulrasheed Maina - Abdulrahman Dambazau
Abdulrahman Dambazau, onye na-arụ ọrụ n'ime ime ụlọ, kwuru na ọ bụghị ya ka ọ ga-esi nwetaghachi Abdulrasheed Maina, bụ onye isi oche nke Ụlọ Ọrụ Reform Task (PRTT), n'ime ọrụ obodo.
Mgbanwe dị iche iche: Ọ bụrụ na ndị ọrụ arụ ọrụ, arụ ọrụ
Onye isi nke ọrụ ndị ọrụ obodo nke Federation, Oriakụ Winifred Oyo-Ita, kwuru na mgbalị nke nchịkwa nke President Muhammadu Buhari ugbu a iji mezigharịa akụ na ụba nke mba ahụ ga-efu n'efu n'enweghị ọrụ nke ndị ọrụ Nigeria.
Oyo-Ita na-agba ndị ọrụ ume izere okwu ịkpọasị
Onye isi nke ọrụ ndị ọrụ obodo nke Federation, Winifred Ekanem Oyo-Ita, akpọwo ndị ọrụ ihu ọha na mba ahụ ka ha zere ụdị okwu mkparị ọ bụla ma nọgide na-ekpe ekpere maka udo, ịdị n'otu na mmepe nke mba ahụ.